जनतामाथि कालोबजारीको मार, सरकार मौन - Gaunbeshi
जनतामाथि कालोबजारीको मार, सरकार मौन
Posted on ३ कार्तिक २०७७, सोमबार १३:३६ Author Gaunbeshi Comment(0)
देश कोरोना भाइरसको महामारीमा जुधिरहँदा सरकारले हिजो सार्वजनिक रुपमै संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने बतायो । त्यसो त सर्वसाधारणले कोरोना संक्रमित भएपछि आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न थालेको धेरै भइसकेको थियो । पहुँच र प्रभाव भएकाहरुले निःशुल्क कोरोना परीक्षण पटक पटक गरेको जगजाहेर छ । तर, सामान्य नागरिक कोरोना परीक्षणका लागि घन्टौं लाइन बसेर रकम तिरेर गर्दै आएका छन् । परीक्षणबाट संक्रमण पत्ता लागेको अवस्थामा आफै आइशोलेशन र उपचार खर्च व्यहोर्दै आएका छन् ।
सरकारले कोरोना महामारीसँग जुध्न अरबौं खर्च गरिसकेको जनाएको छ । तर, त्यो सामान्य नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन र उपचार गर्न पुगेको छ या छैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । काँग्रेस नेता गगन थापाले सरकारको काम कोरोना संक्रमितको संख्या गन्नेमात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तामा रहेकाहरु पाँच तारे होटलमा आइशोलेशनमा बसे । पाँच तारे स्तरको अस्पतालका बेडहरुमा बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफू संक्रमित भएको र संक्रमणमुक्त भएको जानकारी दिन भ्याए । यो घटनाले सरकार हुनेखानेको मात्र हो र पहुँच र प्रभाव नभई देशमा केही हुँदैन रहेछ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको छ ।
निजी अस्पतालहरुले कोरोना परीक्षणका लागि प्रति व्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । अस्पताल भर्ना हुँदा विरामी र कुरुवा समेतको अनिवार्य परीक्षणको नियम बसालिएको छ । यो सुरक्षाको दृष्टिले ठिकै लाग्ला तर सर्वसाधारण थप रकम तिर्न वाध्य छन् । सार्वजनिक अस्पतालहरुमा सामान्य नागरिकले बेड पाउन मुश्किल भएको छ । जीवन जोगाउन मानिसले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउँछ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भई व्यापारमा केन्द्रित हुँदै आएका अधिकांश अस्पतालले बेडको मूल्य समेत बढाएका छन् । अस्पताल भर्ना हुन अनिवार्य आइशोलेशनमा बस्नुपर्ने नियम बसालेर केही घन्टामै दश हजार रुपैयाँ अतिरिक्त कमाई गर्न थालेका छन् । एकजना अस्पतालका प्रशासक भन्छन्, एक वर्षमा आम्दानी नभएको एकै महिनामा आम्दानी भइसकेको छ । यसरी अस्पतालहरु कोरोना कहरमा झन् आर्थिक फाइदामा सत्रिय भएका छन् । तर, त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु समयमै तलब नपाएर छटपटिइरहेका छन् । सरकार नियमको रटान लगाउँछ । जसको पालना कमजोरहरुका लागि मात्र वाध्यकारी बनेको छ । पहुँच र प्रभाव भएकाहरुका लागि त्यसले कुनै असर गरेको छैन ।
कोरोना कहरका बीच देशमा दशैंको माहोल बनिसकेको छ । तर, यही मौकामा कालोबजार फष्टाएको छ । देशमा अहिलेसम्म कहिले नभएको महङ्गीको मार छ । प्याज प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ पुगेको छ । अधिकांश तरकारीको मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । दाल र गेडागुडीको मूल्य वृद्धि भएको छ । चीयापत्ती प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भएको छ । तर, सरकार मूल्य वृद्धि भएको छैन भनी जग हसाईँरहेको छ । जनताले सुपथ मूल्यमा केही नपाउने अवस्था बनेको छ ।
दैनिक उपभोग्य सामग्री सबैजसोमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारको वाणिज्य विभाग यसमा मौन देखिन्छ । सामान्य जनताका लागि बोलिदिने र गरिदिने कोही छैन । उनीहरुका लागि सरकार नै नभएको आभाष हुँदैछ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो सरकार चाहिंदैन भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, सरकार जनताको लागि सबथोक गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ । सत्ताको टाकुरीमा बसेर मैदानमा समस्या भोगिरहेका जनताको पीडाको रमिता हेर्दै लाभको पदमा रहेकाहरु मस्ती मारिरहेछन् ।
बर्षमा एक पटक सर्भिसिङ गराए पुग्ने बीएमडब्ल्यु बाइकको मूल्य कति ?
Posted on २६ आश्विन २०७७, सोमबार १३:०९ Author Gaunbeshi
काठमाडौं । बलियो र मजबुत इन्जिनका कारण जर्मन अटो ब्रान्ड बीएमडब्ल्युका बाइक नेपाली बजारमा लोकप्रिय बन्दै गइरहेका छन् । नेपाल भित्रिएको दुई बर्षमै बीएमडब्ल्युका बाइक २ सय ५० वटा विक्री भइसकेको आधिकारिक वितरक बीएमडब्ल्युु मोटरार्ड नेपाल जनाएको छ । आकर्षक डिजाइन, आरामदायी फिचर्स र बलियो तथा मजबुत बनावटका कारण यी बाइक लोकप्रिय बनेको वितरक कम्पनीको […]
Posted on २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:२१ Author Gaunbeshi
रत्नननगर, २३ असोज: दानामा भएको चर्को मूल्य वृद्धिका कारण नेपालका अण्डा उत्पादक किसान मारमा परेका छन् । दानामा भएको चर्को मूल्य वृद्धिले किसान अण्डा बिक्रीबाट न्यूनतम उत्पादन खर्चसमेत उठाउन नसकिरहेकाले उनीहरु मारमा परेका हुन् । दानामा भएको चर्को मूल्य वृद्धिले बन्दाबन्दी यता अण्डा उत्पादनमा ४० प्रतिशत गिरावट आएको नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका […]
Posted on २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १३:०४ Author Gaunbeshi
काठमाडौं, २७ असोज । हिजो खिम्ती ढल्केबर २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तर्गत सिन्धुली खण्डमा ६ वटा टावर स्थानीय वासिन्दाले गाड्न नदिएकाले आयोजना दस वर्ष पर धकेलियो । यसबाट राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँको क्षति भयो । आज सिन्धुलीकै नियति सोलु कोरिडरले पनि भोग्दैछ । उदयपुरको कटारीनगरपालिका अन्तर्गत मरुवामा स्थानीयले १० वटा टावर गाड्न दिएका छैनन् […]
हत्कडी चढाइने अनौठो मन्दिर, जहाँ कैदीले पुजा गर्छन्
Posted on २१ आश्विन २०७७, बुधबार ०८:०७ Author Gaunbeshi
शक्तिपीठ र मन्दिरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा
Posted on ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १२:५१ Author Gaunbeshi
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् रानीपोखरीको उद्घाटन
Posted on ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १२:३६ Author Gaunbeshi
Posted on १२ कार्तिक २०७७, बुधबार ०८:१९ Author Gaunbeshi
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालको आइसियूमै बिरामी बन्धक
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार ०७:५३ Author Gaunbeshi
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:४३ Author Gaunbeshi